Raage Oomaar”Waa Guul siyaasadeed oo u soo hoyatay Villa Soomaaliya go’aankii lagu ceyriyay Mr. Haysom,” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Raage Oomaar”Waa Guul siyaasadeed oo u soo hoyatay Villa Soomaaliya go’aankii lagu...
Raage Oomaar”Waa Guul siyaasadeed oo u soo hoyatay Villa Soomaaliya go’aankii lagu ceyriyay Mr. Haysom,”
Wariyaha Soomaaliyeed ee caanka ah Raage Oomaar ayaa guul siyaasadeed weyn oo usoo hoyatay Villa Somalia ku tilmaamay go’aankii lagu cayriyey ergeygii QM ee Soomaaliya Nicholas Haysom.
Raage Oomaar ayaa qoraaal uu soo dhigay bartiisa twitter­ka ku sheegay in Villa Somalia ay bahdishay xoghayaha guud ee QM Antoni Guterres iyo QM, kadib markii ay cayrisay Haysom.
“Guul weyn oo usoo hoyatay Villa Somalia oo bah­dishay Guterres iyo QM. Dowladda Somalia waxay cayrisay wakiilkii gaarka ahaa ee QM ee Soomaalia Nicholas Haysom. QM waxay sheegtay in taasi aan la ogoleyn. Hase yeeshee waa ay is­dhiibtay waxayna sheegtay inay beddeli doonto”
Qoraal kale oo Raage uu ugu jawaabay agaasimaha mashruucda hay’adda ICG ee GeeskaAfrika, Rashiid Cabdi ayuu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadatay go’aan siyaasadeed ay ogtahay inuu guul siyaasadeed uga horseedi doono xagga shacabka.
Waxa uu yiri “Dowlad kasta waxay ay cayrsan doontaa siyaasaddii u shaqeeneysaa islamarkaana ah guul siyaasadeed. Tani waxay guul dhameystiran u tahay Villa Somalia iyo “waddaniyiinta fog”, sida aad ugu yeerto, waxay muujiyeen in naceybka darran ee shaqada QM uu shaqeeyo, UNSomalia­na waa ay is dhiibtay”